Oda Esitokisini UBULILI AMADOLOLI JABULA INCREDIBLY NGOKUTHUNYELWA FAST
Onke Onodoli Bezocansi Abasesithombeni Abakulungele Ukuthunyelwa Kusuka E-United States
Dlulisa amehlo omkhulu wethu esitokweni onodoli bezocansi. Thola ir ngokushesha kusuka kukhwalithi yethu yokwazi okuhle kakhulu. Lab 'onodoli bahanjiswa ngezinsuku ezimbalwa nje!
Isikhathi sokuthumela sase-US 3 kuya kuzinsuku ezi-5 zebhizinisi.
* Intengo yamadokodo ocansi asesitoko aboniswe lapha yintengo yokugcina, isaphulelo sokunyusa asikwazi ukusetshenziswa. Onodoli abasesitoko batholakala kuphela kuma-oda wase-USA
I-Piper-The Doll Doll enezinwele ezinde eziMnyama Namehlo Amakhulu I-WM ikuKiss ngo ...
I-Setlla - E-Stock California Warehouse Spot Sex Doll Ithunyelwe kungakapheli ama-24 ...
Oda I-Stock Yakho Yesitoko Ngakwesokudla - Kuphephile Futhi Kuphephile!
Lab 'onodoli bezocansi bagcinwe endaweni yethu yokugcina izinto e-USA futhi bakulungele ukuthunyelwa. Onodoli abasesitokisini baphelele uma ufuna unodoli wezocansi othumela ngokushesha futhi ungakhathali kangako ngokwezifiso. Lapho i-oda lakho selifakiwe unodoli wakho uzothunyelwa ngaphakathi kwezinsuku zebhizinisi eziyi-1-2 futhi uzofika emnyango wakho cishe ezinsukwini zebhizinisi eziyi-3-5 (e-USA kuphela).
Uthanda onodoli bethu "abatholakala ngokushesha" futhi ungathanda ukuwuthenga? Ngemuva kwalokho oda i-doll oyithandayo ngqo lapha futhi usebenzise leli thuba. Ngabe udoli wakho ulethwe mahhala noma umgcinele ukuthi azolandwa, ngale ndlela kungowakho ongamthatha.
Izitayela zezinwele eziyi-15 ziyatholakala
Isiqephu esisodwa, uhlobo lokufaka lwesitho sangasese sowesifazane ngokuzithandela
Umbala wesikhumba ozenzakalelayo, amehlo ansundu-mnyama, i-lipstick ebomvu, amabele aqinile, umbala wesikhumba i-areola, umbala wesikhumba umzimba ophansi, akukho ukufakelwa izinwele, okungama;
Izesekeli: AmaWigi, izingubo zokulala, izingubo zangaphansi, amakhekhe, izinduku zokushisa, izihlanza.
Thenga Unodoli Wocansi Ose-Stock - Jabulela Ukuthumela Okushesha Okumangalisayo!
Lapho nje sithumela unodoli wakho wezocansi otholakala ngokushesha kuwe, kuzokwenzeka ngesikhathi esifushane kakhulu sokulethwa, ngoba sonke sinonodoli abakhona ngokushesha esitokweni. Uma uhlela ukuthenga unodoli wezocansi futhi ngenkathi wenza ishibhile, ungabe usaya phambili! Idoli lakho locansi lingathunyelwa ngokushesha.
Lapha onodoli bangathumela i-oda lakho nganoma yisiphi isikhathi! Sonke masiphephe, sihlale sizolile, futhi sigcine ukholo ngezikhathi ezimnandi. Uhlu lwethu olubanzi luhlinzeka amakhasimende ethu ngezinhlobo eziningi zokukhetha kusuka kumadoli ayisisekelo kuya ekutshalweni kwezobuciko. Siyajabula ukukumema ukuthi uvakashele esitolo sethu. Sebenzisa inqola yethu yokuthenga ephephile ukuthenga ngokuzethemba nangokuphepha.